တရုတ်စိန်ဖြတ်တောက်ခြင်းဓါး၊ စိန်လွှင့်ဓါး၊ ကြွေထည်ဖြတ်စက်၊ စကျင်ကျောက်ဖြတ်တောက်ခြင်းဓါး၊ ကျောက်ဖြတ်ဓါး၊ စက်ဓါးစက်နှင့်ထုတ်လုပ်သူများ | Boda
စိန်ဖြတ်တောက်ခြင်းဓါး၊ စိန်လွှင့်စက်၊ ကြွေထည်ဖြတ်စက်၊ စကျင်ကျောက်ဖြတ်တောက်ခြင်းဓါး၊
စိန်ဖြတ်တောက်ခြင်းသည်ကျောက်တုံး၊ ကွန်ကရစ်၊ ကြိုတင်စီစဉ်ထားသည့်ကျောက်ပြားများ၊ လမ်းဟောင်းများ၊ ကြွေထည်စသည်တို့ကဲ့သို့သောခက်ခဲပြီးပျက်စီးလွယ်သောပစ္စည်းများအတွက်ကျယ်ပြန့်စွာအသုံးပြုသောဖြတ်တောက်ခြင်းကိရိယာတစ်ခုဖြစ်သည်။ စိန်ဖြတ်တောက်ခြင်းကိုအဓိကအားဖြင့်အပိုင်းနှစ်ပိုင်းခွဲခြားထားသည်။
Matrix သည်ကပ်လျက် Cutter Head ၏အဓိကထောက်ခံမှုအစိတ်အပိုင်းဖြစ်ပြီး Cutter Head သည်အသုံးပြုမှုဖြစ်စဉ်တွင်ဖြတ်တောက်ခြင်းအစိတ်အပိုင်းဖြစ်သည်။ Cutter head ကိုအသုံးပြုစဉ်တွင်စဉ်ဆက်မပြတ်လောင်လိမ့်မည်။ Matrires မပါ ၀ င်ပေ။ Cutter head သည်စိန်ပါသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ လက်ရှိအချိန်တွင်စိန်သည်အခက်ခဲဆုံးသောပစ္စည်းဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်အရာ ၀ တ္ထုကိုဖြတ်တောက်သောခေါင်းတွင်ပွတ်တိုက်အားဖြင့်ဖြတ်တောက်နိုင်သည်။ စိန်အမှုန်များကိုသတ္တုဖြင့်ဖြတ်စက်၏ခေါင်းတွင်ပတ်ထားသည်။
၁။ ရောနှောထားသောစိန်ဖြတ်တောက်ခြင်းဓါးကို - အအေးနှင့်အပူပေးသည့်ခွဲစပ်ခြင်းနှင့်ခွဲခြင်း။
2. ဂဟေဆော်သောစိန်ဖြတ်တောက်ခြင်းဓါး။ ဂဟေဆော်ခြင်းနှစ်မျိုးရှိသည်။ ကြိမ်နှုန်းမြင့်ဂဟေနှင့်လေဆာဂဟေ။ ကြိမ်နှုန်းမြင့်သောဂဟေဆော်ခြင်းကရှုထောင့်နှင့်အလွှာကိုအပူချိန်မြင့်သောအရည်သွန်းသောအလတ်စားမှတစ်ဆင့်အတူတကွဂဟေဆော်နိုင်ပြီးလေဆာဂဟေဆော်ခြင်းကအပူနှင့်လေဆာရောင်ခြည်မှ ဖြတ်၍ ဖြတ်သော ဦး ခေါင်းနှင့်အလွှာတို့၏သတ္တုစပ်ကိုသတ္တုစပ်အဖြစ်ပေါင်းစပ်နိုင်သည်။
3. Electroplated စိန်ဖြတ်တောက်ခြင်းဓါး: ဖြတ်တောက်ခြင်းခေါင်း၏အမှုန့် electroplating နည်းလမ်းအားဖြင့်အလွှာနှင့်အတူပူးတွဲထားသည်။
၁။ စဉ်ဆက်မပြတ်အနားသတ်သောဓါး - စဉ်ဆက်မပြတ်လွှင့်သောဓါးကိုအများအားဖြင့် sintering method ဖြင့်ပြုလုပ်သည်။ ကြေးနီနှောင်ကြိုးကိုအခြေခံအားဖြင့်အခြေခံပစ္စည်းအဖြစ်အသုံးပြုသည်။ ဖြတ်တောက်သည့်အခါဖြတ်တောက်ခြင်းအကျိုးသက်ရောက်မှုကိုသေချာစေရန်ရေဖြည့်ရမည်ဖြစ်ပြီးလေဆာရောင်ခြည်အားဖြင့်ကွာဟမှုအမျိုးအစားကိုဖြတ်နိုင်သည်။
၂။ ဓါးအမျိုးအစားဖြတ်တောက်ခြင်းအပိုင်း - လွှသွားထိခြင်း၊ လျင်မြန်စွာဖြတ်ခြင်းမြန်နှုန်း၊ ခြောက်သွေ့။ စိုစွတ်သောဖြတ်တောက်ခြင်းနည်းလမ်းများအတွက်သင့်တော်သည်။
၃။ တာဘိုင်အမျိုးအစားဖြတ်တောက်ခြင်းဓါး - ပထမပစ္စည်းနှစ်မျိုး၏အားသာချက်များနှင့်ပေါင်းစပ်လိုက်သောသွား၏သွားသည်တစ်ခြားယူနီဖောင်းခုံးကဲ့သို့သောတာဘိုင်ကိုအဆက်မပြတ်ပေးသည်။ ၎င်းသည်ဖြတ်ခြင်းမြန်နှုန်းကိုတိုးတက်စေပြီးလုပ်ငန်းသက်တမ်းကိုရှည်စေသည်။
ကွဲပြားခြားနားသောပစ္စည်းများအတွက်စိန်လွှင့်ဓါတုဗေဒအမျိုးအစားအမျိုးမျိုးကိုရွေးချယ်သည်။ မတူညီသောအမှုန့်ပုံစံများသည်အရည်အသွေး၊ အကျိုးသက်ရောက်မှု၊ အရည်အချင်းနှုန်းနှင့်ပစ္စည်းထုတ်ကုန်များ၏ကုန်ကျစရိတ်နှင့်အကျိုးကျေးဇူးအပေါ်တိုက်ရိုက်သက်ရောက်မှုရှိသောအမျိုးမျိုးသောပစ္စည်းများ၏သွင်ပြင်လက္ခဏာများအတွက်သင့်လျော်သည်။
စိန်စက်ဝိုင်းလွှင့်စက်၏ထိရောက်မှုနှင့်သက်တမ်းကိုအကျိုးသက်ရောက်စေသောအချက်များမှာလုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုအဆင့်များ၊ စိန်အမှုန်အရွယ်အစား၊ အာရုံစူးစိုက်မှု၊ နှောင်ကြိုးခိုင်မှုစသည်တို့ဖြစ်သည်။
1. Terrazzo စကျင်ကျောက်ကိုဖြတ်တောက်ရန်သင့်တော်သည်။
၂။ ဘိလပ်မြေခင်း၊ မာကြော။ သတ္တုမဟုတ်သောပစ္စည်းများဖြတ်တောက်ခြင်း။
၃။ တံတား၊ တံတား၊
၅။ မြူနီစီပယ်ဆောက်လုပ်ရေးတွင်ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်အသုံးပြုခြင်း၊ လမ်းပြန်လည်တည်ဆောက်ခြင်း၊ လေယာဉ်ပြေးလမ်းဆောက်လုပ်ခြင်း၊ ကွန်ကရစ်ခင်းနှင့်အခြားဆောက်လုပ်ရေးနေရာများတွင်အထူးသဖြင့်ကတ္တရာနှင့်ကွန်ကရစ်ခင်းခင်းဖြတ်တောက်ခြင်းအတွက်အထူးသင့်လျော်သည်။
လက်တွေ့တွင်စိန်စက်ဝိုင်းလွှစက်၏အမြန်နှုန်းမှာစက်ကိရိယာအခြေအနေများ၊ လွှစက်၏အရည်အသွေးနှင့်ဖြတ်ရမည့်ကျောက်များ၏ပိုင်ဆိုင်မှုများကြောင့်ကန့်သတ်ထားသည်။ အကောင်းဆုံးဝန်ဆောင်မှုသက်တမ်းနှင့်လွှဓါး၏ထိရောက်စွာဖြတ်တောက်ခြင်းအားဖြင့်လွှဓါးသွား၏အမြန်နှုန်းကိုကျောက်တုံးများ၏ဂုဏ်သတ္တိများအရရွေးချယ်သင့်သည်။ ကျောက်လွှင့်သည့်အခါလွှဓါးသွား၏ linear အမြန်နှုန်းကို ၂၅ မီတာမှ ၃၅ မီတာ / စအကွာအဝေးတွင်ရွေးချယ်နိုင်သည်။ အလွန်မြင့်မားသော quartz ပါ ၀ င်ပြီးဖြတ်ရန်ခက်ခဲသော granit အတွက် saw blade linear speed ၏အနိမ့်ဆုံးကန့်သတ်ချက်သည်သင့်တော်ပါသည်။ ကျောက်မျက်နှာပြင်အုတ်၏ထုတ်လုပ်မှုတွင်စိန်စက်ဝိုင်းလွှင့်စက်၏အချင်းသည်သေးငယ်ပြီးအမြန်နှုန်းမှာ ၃၅ မီတာ / s အထိရှိသည်။
150 မီလီမီတာစိန်ဖြတ်တောက်ခြင်းဓါး, 180 မီလီမီတာစိန် slotted ဓါး, 350 မီလီမီတာစိန်လွှင့်ဓါး, 400 မီလီမီတာစဉ်ဆက်မပြတ်ချွန်ထက်ကျောက်စေ့လွှင့်, 500 မီလီမီတာကွန်ကရစ်လွှဓါး, 600 မီလီမီတာစိန်နံရံဖြတ်တောက်ခြင်းဓါး, 700 မီလီမီတာနံရံလွှဓါး, 800 မီလီမီတာစိန်ပုံဖြတ်တောက်ခြင်း ဓါး, 900 မီလီမီတာစိန်ဓါး, 1000 မီလီမီတာစိန်ဓါး, 1200 မီလီမီတာကွန်ကရစ်လွှဓါး။
အစာကျွေးမှုနှုန်းသည်ဖြတ်ရမည့်ကျောက်၏အရှိန်နှုန်းဖြစ်သည်။ ၎င်း၏အရွယ်အစားသည် sawing မှုနှုန်း၊ လွှစက်ပေါ်ရှိအင်အားနှင့် sawing inရိယာအတွင်းရှိအပူဓာတ်များဖြန့်ဝေခြင်းကိုသက်ရောက်သည်။ ၎င်း၏တန်ဖိုးကိုဖြတ်ရမည့်ကျောက်၏သဘောသဘာဝအရရွေးချယ်သင့်သည်။ ယေဘုယျအားဖြင့်ပြောရလျှင်စကျင်ကျောက်ကဲ့သို့သောပျော့ပျောင်းသောကျောက်တုံးများကိုဖြတ်တောက်ခြင်းသည်အစာကျွေးမှုနှုန်းကိုသင့်လျော်စွာတိုးမြှင့်နိုင်သည်။ အကယ်၍ အစာနှုန်းသည်အလွန်နိမ့်ပါက sawing နှုန်းကိုတိုးတက်စေရန်ပိုမိုအထောက်အကူပြုသည်။ အစာကျွေးမှုနှုန်းနိမ့်လွန်းပါကစိန်အစွန်းကိုအလွယ်တကူသုတ်နိုင်သည်။ သို့သော်ကြမ်းသောဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံနှင့်မညီမညာဖြစ်နေသောခဲယဉ်းမှုရှိသောကျောက်များကိုလွှင့်ထုတ်သောအခါအမြန်နှုန်းကိုလျှော့ချသင့်သည်။ သို့မဟုတ်ပါကသစ်စက်၏တုန်ခါမှုကြောင့်စိန်အစိတ်စိတ်အမြွှာမြွှာကွဲသွားစေပြီး၊ sawing granit ၏အစာကျွေးမှုနှုန်းကိုယေဘုယျအားဖြင့် ၉ မီတာမှ ၁၂ မီတာ / မိနစ်အတွင်းရွေးချယ်သည်။
BOSENDA သည်ဖြတ်တောက်သော disc / Diamond Saw Blade / Diamond Cutting Blade အမျိုးမျိုးကိုထောက်ပံ့ပေးသည်။ ဦး ခေါင်းသည်ချွန်ထက်။ အကြမ်းခံ။ ၎င်း၏သက်တမ်းသည်အထွေထွေစျေးကွက်ရှိဖြတ်တောက်သည့် discs များထက်ပိုကြာသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ကွဲပြားခြားနားသောဖြတ်တောက်ခြင်း discs များ၏အသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုဖော်ပြပြီးကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်များကိုတိုက်ကြီးများအားလုံးသို့ရောင်းချသည်။ ဖောက်သည်များ၏လိုအပ်ချက်များနှင့်အညီစံသတ်မှတ်ချက်မဟုတ်သောဖြတ်တောက်ခြင်း disc များကိုလည်းပြုလုပ်နိုင်သည်။
BOSENDA ဖြတ်တောက်သော disc head အစိတ်အပိုင်းကိုအရည်အသွေးမြင့်မားသောသတ္တုစပ်ဖြင့်ဖော်စပ်။ ၎င်းသည် discs များအားပိုမိုကြာရှည်ခံစေပြီးသက်တမ်းကိုရှည်စေသည်။
ရှေ့သို့ လျှပ်စစ်သံတူ၊ လျှပ်စစ်ဆွဲအားစက္ကူ၊ SDS၊ မက်စ်၊ ဟက်စ်၊
နောက်တစ်ခု: စိန်ကြိတ်ခြင်း၊ ကျောက်ကြိတ်ခြင်း၊ စကျင်ကျောက်၊ ကျောက်ကြိတ်ခြင်း၊ ကျောက်ကြိတ်ခြင်း
စိန်ကြိတ်ခြင်း, ကျောက်ကြိတ်, စကျင်ကျောက်, grani ...